Mozika nentim-paharazana : haneho ny tena malagasy fa tsy safiotra ny Loharano (NewsMada) | AEMW
Mozika nentim-paharazana : haneho ny tena malagasy fa tsy safiotra ny Loharano (NewsMada)
« Angamba, efa betsaka ny tarika miangaly ny mozika nentim-paharazana, saingy, raha ny tena izy, vitsy izy ireo noho ny mpanao karazan-kira hafa », hoy i Rivo, anisan’ny mpikambana ao amin’ny tarika Loharano. Izay indrindra no antony nirosoan’izy ireo lalindalina kokoa amin’ity sehatra ity. Tanjona ny haneho ny tena vakoka malagasy, amin’ny lafiny rehetra.
Efa mpanao vakodrazana tany amin’ny tarika hafa ny sasany amin’ny mpikambana ao amin’ny Loharano. Noho ny fiainana samy manana ny azy, niparitadritaka io tarika io ary tsy nisy nandimby. Tao anefa ireo mbola vonona ny hanohy. Izay no nahatonga an’i Rivo sy ny namany roa lahy hanorina ny tarika Loharano, ny taona 2013. Ankehitriny, miisa 24 ny mpikambana ao amin’ity tarika ity ka vehivavy ny 14 ary lehilahy ny 10. Ao anatin’izany ny mpandihy, ny mpitendry sy ny mpihira.
Azo lazaina ho efa betsaka ihany ny tarika miangaly ny vakoka nentim-paharazana. Ho an’i Rivo, mbola tsy ampy izany raha toa ka ny mpanao mozika hafa no mbola betsaka. Izany hoe, mbola mila tohana goavana ny famohazana sy fampahafantarana ary indrindra ny fampitiavana ny mozika malagasy.
Nohamafisin’i Rivo fa tsy hanafangaro ny mozika nentim-paharazana malagasy amin’ny mozika hafa mihitsy izy ireo. « Izay no anisan’ny mampiavaka ny tarika », hoy izy. Tsy ny gadona ihany no tian’izy ireo hambara eto fa voakasik’izany koa ny dihy sy ny zavamaneno ampiasaina. Tsara ny manamarika fa tetezin’ny tarika Loharano avokoa ny lafivalon’ny Nosy. Ezahiny ampahafantarina avokoa ireo mozika nentim-paharazana isam-paritra ka voakasik’izany ny fomba fitafy, ny volo, ny zavamaneno ary ny dihy.
Vao miditra eo amin’ny sehatry ny zavakanto ny tarika, araka ny nambaran’izy ireo. Vaindohandraharahan’ny tarika aloha ny ny fitarihana ny olona hankafy ny vakoka malagasy sy ny talentan’ny mpikambana eo amin’ny sehatry ny kanto. Na izany aza, efa an-dalana ny fanodinana rakitsary vaovao, taorian’ny « Akon’ny ela », efa mandeha any amin’ny fahitalavitra any.
« Efa vonona ny hira, raha hamoaka tahirin-kira (CD na DVD), saingy olana goavana mamono ny mpanakanto ny piraty », araka ny nambaran’i Rivo hatrany. Araka izany, tsy misy hatreto ny vinavina hamokatra tahirin-kira.
← Mpanoratra sy mpikabary : nomem-boninahitra ny nahavita be (NewsMada)
Groupe Aina : mitohy hatrany ny fizarana vokatra vaovao (NewsMada) →